Wasaaradda Amniga Oo Sheegtay In Muddo Kooban Gudaheed Lagu Xasilinayo Amniga Muqdisho – Goobjoog News
Wasaaradda Amniga Oo Sheegtay In Muddo Kooban Gudaheed Lagu Xasilinayo Amniga Muqdisho
Wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abukar Islow ayaa sheegay iney rajeynayaan Lixda bil ee soo aadan in Muqdisho ay noqoto meel amni ah, islamarkaana laga suuliyo qaraxyada, dilalka iyo wax walbo oo amniga wax u dhimaya.
Waxa uu sheegay wasiirka in sida kaliya ee amni looga dhigi karo Muqdisho ay tahay iyadoo hubka la iska dhigo, sidoo kalena hadda isbedal weyn oo amni laga dareemayo magaalada.
Xukuumadda uu hoggaamiyo Kheyre ayuu sheegay iney ka go’an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo celiso amniga guud ee dalka.
“Waxaan rabnaa Lixda bil ama sanadka soo socda in Muqdisho aanay cidna ku dhiman, lagu dilin qarax ama Bistoolad, waxayna sidaasi ku dhici kartaa hubkaan oo iska xareyno, dadka waxaan leeyahay yaan la baqin, waad argtaan in Muqdisho ay ka xasiloontahay sidii hore” ayuu yiri wasiirka Aniga.
Dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka wadda howlgallo lagu xasilanayo amniga, iyadoo sidoo kale ay socoto hub uruurin ay ciidanka xasilinta caasimadda sameynayaan.
Ciidamada K/galbeed Oo Wada Howlgal Lagu Baadigoobayo Raggii Ka Dambeeyay Dagaalkii Baydhabo
Sh/hoose: Ciidamada Dowladda Oo Ku Baxay Deegaanno Ay Mamulaan Al-shabaab Iyo Barakac Bilowday
Trump: Waxaa La Gaaray Xilligii Qatar Ay Joojin Laheyd Maalgelinta Argigixisada